Airtel – Varotra SIM: fifaninanana hanitarana ny fandraharahana | NewsMada
Airtel – Varotra SIM: fifaninanana hanitarana ny fandraharahana
Mbola fa vitsy ny mampiasa finday sy ny tambojatra miaraka aminy eto Madagasikara, na mitombo haingana ny olona manana azy. Olona telo amina 10 ny mampiasa finday, tambajotra rehetra, antony iray ampirisihan’ny Airtel Madagascar hanitarana ny fandraharahana. « Mifandray betsaka amin’izany fampiasana fifandraisan-davitra izany, indrindra fa mivoatra koa izao ny teknolojia mifandraika aminy, ny tontolon’ny asa sy ny fandraharahana miaraka aminy », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Eddy Kapuku.
Fomba iray hanitarana ny fifandraisan-davitra eto an-toerana ny fanokafana fifaninanana eo amin’ny samy mpivarotra Sim Airtel. Koa ny loka voalohany hahazoana fiara, ho an’izay mahalafo be indrindra manerana ny Nosy. Eo koa ny loka maro samy hafa (moto, fahitalavitra, finday avo lenta …). Fiaraha-miasan’ny Airtel amin’ireo mpivarotra izao, manakaiky ny mpanjifa hatrany, sady hampandrosoana ny toekarena.
« Adidinay ny mampahafantatra ny tsara vitanay, koa avy amin’izany ny fanentanana ny olona hivoatra sy handroso, amin’ny finiavana hampahomby sy hampitombo ny zava-bita anatin’ny orinasa na ny fandraharahana », hoy ny tale jeneraly. « Koa antsoinay izay rehetra maniry handray anjara amin’ny fanitarana ny serasera, hifandray amin’ny vahoaka malagasy », hoy ny tale jeneraly sy ny talen’ny varotra, Randrianarison Heritiana.
Nampahafantarina ny 20 novambra 2020 teo ny fifaninanana ho an’ny mpivarotra Sim Airtel, ary hifarana ny 31 janoary 2021. Andiany taona faha -7 izao fifaninanana izao.